किन आउँछ शरीरमा मुसा ? प्रकार, लक्षण र उपायबारे जानौं
२०७६ कार्तिक १ शुक्रबार २०:१६:००
यदि गर्धनको पछाडी मुसा छ या शरीरको यस्तो ठाउँ जहाँ झट्ट सबैको नजर पनि पर्दैन भने त्यति धेरै चिन्ताको बिषय हँुदैन । तर, कहिले काहि मुसा अनुहारमा पनि आईदिन्छ । जहाँ सबैको नजर सोझै पर्छ । जस्तैं गाला, आँखी भौ, आँखाको परेली, नाकको टुप्पो, निधारमा । अनुहारमा यसरी आएको मुसा हेर्दा राम्रो देखिदैन । अझ सार्वजनिक समारोहमा त जवाफ दिदादिदा हैरान हुन्छ । साथै सौंन्दर्य नै प्रभावित हुने त छदैछ । साधारण देखिने मुसा कहिले काही क्यान्सरको कारण पनि बन्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा मुसालाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरी हाटाउनु नै राम्रो हुन्छ ।
किन आउँछ मुसा ?
जन्मिएपछि देखा पर्ने मुसाको मुख्य कारण ईन्फेकसन नै हो । यी मुसाहरु शरीरमा आउनुको कारण एक प्रकारको ह्युमन पेपिलोमा नामक भाइरस हो । छालामा पेपिलोमा भाइरसको कारण सासाना, खस्रो, कडा खालको, नदुख्ने दानाहरु छालामा पलाएको देखिन्छ । केही प्रकारका मुसाहरु शारीरिक सम्पर्कको माध्यमले पनि फेलिन्छ ।
मुसा तोरीको दानादेखि अंगूरको आकार जत्रो पनि हुनसक्छ । मुसा शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जान्छ । यो एक किसिमको छालाको रोग हो । जसलाई मुसा (वार्टस) भनिन्छ । सामन्यतया शरीरमा देखिने मुसाहरु कालो, खैरो, सेतो, रातो हुन्छन् । काही छालाको रंग जस्तै पनि हुन्छ । जसले गर्दा मानिसलाइ मुसा आएको थाहा नै हुदैन । यसकारण मानिसहरु यसको बारेमा ध्यान दिदैनन ।
धेरैजसो मुसाहरु छालाको सतह भन्दा आलिकमाथि उठेको खस्रो सतह भएको हुन्छ । आकारमा यो गोलो, अन्डाकार, च्याप्टो किसिमको पनि हुन्छ, भने केहि चिल्लो मुलायम र च्याप्टो सतह भएको हुन्छ । कुनै मुसा पेन्डुलम किसिमको हुन्छ यताउति हल्लिने खालको । केही मुसा भने छँुदा दुख्ने खालको हुन्छ । कुनै अंजेरु पलाएको जस्तै हुन्छ । पानीले धुँदा वा नुहाउँदा ढाडिएर फुलेर आउछ । हेर्दा घिन लाग्ने देखिन्छ, यस्ता मुसाहरु बिषेशगरि हात र खुट्टामा देखिन्छ ।
साधारण देखिने मुसालाई कमन वार्टस भनिन्छ । यस्ता मुसा हात, खुट्टा, मुख वा कपडाले नढाकिने शरीरका अंगमा बढी देखिन्छ । यी मुसा साना देखि अत्यन्त ठुला पनि हुनसक्छ । यो मुसा हेर्दा खस्रो देखिने, साह्र्रो र पानी पर्दा फुल्ने खालको हुन्छ । बच्चा र बुढा सबैलाई यसप्रकारको मुसा आउँछ ।
च्याप्टो खालको मुसा (फ्लयाट वार्टस) :
बच्चा र व्यस्यक व्याक्तिमा बढी देखिन्छ । बिषेशगरी केटाकेटीको अनुहार, निधार, हात र खुट्टामा देखिन्छ । यो अन्य मुसा जस्तो सजिलै थाहा पाउन सकिन्न । यस्ता मुसा सासाना थोप्ला जस्ता देखिन्छन र यसको टुप्पो पनि समथर हुन्छ । यो दाह्री जुँगा भएको ठाउँमा बढी आउँछ । यस प्रकारको मुसा बच्चाको हात मा पनि देखिन्छ ।
जेनिटल वार्टस (कन्डिलोमा) अर्थात गुप्तांगमा देखिने:
यो मुसा सामान्यतया गुप्तांग वरिपरि र तिघ्राको बिचमा, तथा महिलाको योनीका साथै मलद्वार मा पनि देखिन्छ । यी मुसा यौन सम्पर्कबाट सर्छ । यी मुसाहरु आकारमा अंगुरका झुप्पा जस्ता ससानादेखि ठुला ठुला झुप्पा जस्ता पनि हुनसक्छ । हत्केला र खुट्टामा देखिने मुसालाई प्लामो प्लान्टर वार्टस भनिन्छ । हत्केला र खुटाको पैतालामा हुने यस प्रकारका मुसाहरु दुख्ने र सार्हो हुनुको साथै बिचभागमा केही खाल्डोयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा ब्याक्तिलाई हिडडुल गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । नङको जरा वा वरपर यस्तो मुसा आउँदा अत्यन्तै दुख्ने हुन्छ ।
यस्तै अर्को प्रकारको मुसा जुन प्रायः गरी (बुचर) कसाइ (मासु काटी रहने मान्छेको हातमा देखिन्छ । यसप्रकारको मुसालाई बुचर वार्टस भनिन्छ । यो साहै कडा हुन्छ र हेर्दा काऊली जस्तो देखिन्छ ।
क्यान्सरको कारक पनि हुन्छ मुसा
यदि तपाई जन्मिदा देखिने कुनै मुसा छ भने यो हानीकारक हँुदैन, तर जन्मेपछि मुसा भएको हो या ठुलो भएपछि देखिएको हो भने समय बित्दै जाँदा यो क्यान्सरको कारक बन्न सक्छ । यदि कुनै व्याक्तिमा ३० बर्षको उमेर पछि मुसा पलाएको छ भने त्यसमा क्यान्सरका हुने खतरा बढी रहन्छ ।
यस्तो अवस्थाका मुसा खतरानाक हुन्छ
शरीरमा भएको कुनै मुसाबाट रगत आएमा, यसलाई नजर अन्दाज गर्नु हँुदैन । यदि मुसा भएको ठाउँ चिल्लाउ छ भने पनि यसलाई हलुका किसिमले लिनु हुँदैन । तुरन्त चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
हुनत मुसा ६ महिनादेखि बर्ष दिनभित्र आफै हराएर जान थाल्छ । त्यसको लागि कुनै विषेश उपचार गरिहाल्नु पर्दैन । शरीरका बिभिन्न भागमा रहेका मुसाको उपचार विभिन्न प्रकारको विधिबाट गरिन्छ । जस्तैं भौतिक रुपले नष्ट गर्ने, करेन्टले डामेर वा लेजर प्रबिधिबाट मुसालाई हटाउने गरिन्छ । यी विधिका आफ्नै जटिलता र धेरै साईड ईफेक्टहरु पनि छन् ।
रोगीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षणको साथै मुसा शरीरको कुन अगंमा छ, त्यसको आकार, प्रकार, रंग इत्यादि कुरालाई मध्येनजर राखेर रोगीको उपचार गरिन्छ । मुसाको उपचारको लागि प्रयोग गरिने केही औषधिहरु निम्न लिखित छन ।
- खैरो (ब्राउन( किसिमको मुसाको लागि–थुजा ।
- सुख्खा किसिमको मुसा भएमा– स्टेफिसिग्रिया ।
- फल्याट (चेप्टो) प्रकारको मुसामा–डल्कामारा ।
- झुन्डिएको (पेन्डुलम) जस्तो मुसा छ भने–एसिड नाईट्रिक ।
- पिबयुक्त मुसा छ भने–हिपर सल्फर ।
- औलाको पछाडि पट्टि मुसा देखिएमा (डल्कामारा, थुजा ।)
- मुसा खस्रो, कडा र तिखो चुच्चो निस्केको छ भने–कस्टिकम ।
- हत्केलामा मुसा आएको छ भने–नेट्रम (म्युर, रुटा, नेट्रम, कार्व, एनाकर्डियम ।)
- कम्मर पछाडीपट्टिको भागमा मुसा भएमा–डल्कामारा ।
- पैतालामा भएको मुसाको लागि भने– एन्टीम क्रुड ।
केहि व्याक्ति मुसालाई हटाउन त्यसलाई काट्न लगाउँछन् वा घरमा आफैले काट्ने गर्छन । कसैले चुन र सोडाको मिश्रणको लेदो बनाएर लगाउने पनि गर्छन । तर, यसो कहिले गर्नु हुँदैन । मुसालाई डाम्ने, काट्ने या फुटाउने गर्नाले मुसाको भाइरस शरीरको अन्य भागमा पनि जाने खतरा हुन्छ । जसले गर्दा अझ बढी मात्रा शरीरको बिभिन्न भागमा मुसाहरु पलाएर आउँछ ।